I-barista ekhethekileyo esebenzisa umbala wedayi ukuhambisa ikofu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngokuqinisekileyo kwindawo yokudlela ekhethekileyo ukhe wadibana nomncedisi onayo unesandla esihle sokuhambisa ikofu ngomzobo onomdla ngakumbi kwiifom xa ugalela ubisi. Imizobo esiyibonileyo kwinethiwekhi yothungelwano ngamanye amaxesha.
U-Barista ngumzobi osibonisa ukuthothisa kwakhe ngale ndlela ikhethekileyo yokukhonza ikofu ukuze eze neendlela ezingalindelekanga xa usebenza ngeziselo ezahlukeneyo okanye iikhofi zeempawu ezahlukeneyo. UMason Salisbury ngomnye wabo Kwaye inendlela eyahlukileyo yokubonisa ubugcisa ekukhonzeni ikofu ukusishiya simangaliswe kukuhlangana kwayo kwemibala.
ISalisbury endaweni yokusebenzisa ikofu ukwenza loo mizobo yoqobo, Sebenzisa umbala wokutya. Ngale nto uyakwazi ukwenza eminye imifanekiso kuloo gwebu kukholelwa ukuba kufanelekile ukuba ikhankanywe kwaye unokubona kwimifanekiso eyahlukeneyo endabelana ngayo.
Iimilo ozenzayo zihlala zihlala igobile kwaye zonke zinentsiba-efana nayo ngemibala eyahlukeneyo ebonelela ngeziphumo ezahlukeneyo kuxhomekeke kwidayayi ezisetyenzisiweyo. Fumana ezo zinto zidaliweyo ngokudibanisa ubisi oluxubileyo naloo dayi ikhethekileyo ngaphambi kokuyisebenzisa kwindebe. Okokugqibela, igqiba ngepateni ebonakala kwezinye iimeko njengegqabi elikhula kunye nesebe lalo.
ISalisbury inayo eyakhe i-Instagram apho zihlala zabelana ngolunye uyilo Obu bugcisa bubizwa ngokuba yi-baristas kwabo benza le ndlela ikhethekileyo yokukhonza ikofu, nangona ilapha umahluko xa usebenzisa ezinye iintlobo zedayi. Unokuthi ukuba nekhofi bekungekho nombala ongako njengala mzobi ogama linguSalisbury.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo besinayo kulo mzobi osebenzisa iingxowa zeti njengeseyile ukubonisa izimvo zakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukuhambisa ikomityi yekofu ngendlela enobugcisa